Ny mahamaika tsy mahadodona | NewsMada
Herinandro latsaka kely eo ho eo sisa dia hanomboka ary hisokatra amin’ny fomba ofisialy ity hoe fihaonana an-tampon’ny frankofonia, atao eto amintsika. «Madagasikara ho ivon’izao tontolo izao». Izany ny teny manaitra hita amin’ireo takelaka lehibe fanaovana dokambarotra, amin’ny toerana sasany eto an-dRenivohitra. Ankoatra ireo sainam-pirenen’ireo vahiny handray anjara amin’izany, hita mihofahofa eny amin’ireo « rond point » lehibe amin’ny faritra vitsivitsy, sy ireo mpiasa, toa manao afo am-bilany kely, mamaramparana ny fanamboaran-dalana (mandokoloko, manampitampina…) tsy hita taratra velively amin’ny fiainan’ny mponina andavanandro ny fiatrehana na fiomanana amin’izany.
Raha lazaina amin’ny teny tsotra, tsy maharototra ny vahoaka akory izany frankofonia frankofonia izany, na manao izay ho afany amin’ny fanazavana sy fanentanana etsy sy eroa ihany aza ny fanjakana. «Fihetsiketsehana no betsaka», hoy ny sasany. «Hitondra inona ho any am-bilianay moa izany ?», hoy ny fanontanian’ny hafa…
Toa ny ho fiantraikany ratsy sahady aza izao no efa mandodona sy mampitaintaina azy ireo. Ny sarety sy posiposy ferena tsy hahazo hivoaka hiasa. Tahaka izany koa ny taxi, eny hatramin’ny môtô scooter aza. Ny an’ny mpivarotra amoron-dalana moa efa tantara goavana tsy manam-piafarany. Dia ahoana izany ny fitadiavana ? Ny hohanina anio anefa, tsy hoe efa hita omaly…
Ankoatra ireo, misy ny tsy mampitombin-tsaina; ny fiatrehana ny tondradrano ho an’ny eny ambany tanàna, ny delestazy mbola mamely ny faritra maro, ny fijaliana amin’ny fiaretan-tory amin’ny fantsakana. “Fahirano”, ara-bakiteny… Manginy fotsiny ny tebiteby amin’ny tsy fisian’ny fandriampahalemana ; ny fandrobana sy fanafihana mitam-piadiana, tsy andro tsy alina… Manampy izany, ny tsy fahalalahana amin’ny fanehoan-kevitra, ny herisetra sy ramatahora isak’izay mihetsika ataon’ny manampahefana sy manam-basy…
Izany sy izay tsy voatanisa no zava-misy, tena zava-misy ka ahoana moa no tokony hahaseriny ny vahoaka amin’izany frankofonia izany. Ny mahamaika azy ireo, tsy mahadodona akory ny fanjakana.